Ny ankamaroan'ny indostrian'ny SEO dia mihemotra | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny indostrian'ny SEO dia mihemotra
Talata, Aprily 3, 2012 Alatsinainy, 10 Jona, 2013 Douglas Karr
Mihaino webinar aho izao izao Search Engine Optimization (SEO) ary nahasosotra ahy izany. Ny metrika voalohany resahina ao amin'ny webinar dia adihevitra momba ny firy ny rohy paikady novokarina, ary ny volan'ny teny lakile izay naparitaka tao anaty paikady.
Tsy misy resaka momba fiovam-pony. Tsy misy resaka momba ianarantsika avy. Tsy misy resaka momba mpihaino. Tsy misy resaka momba fisondrotana. Ny fifanakalozan-kevitra dia ny fomba ahafahanao manary banga any ary manandrana mahazo rohy betsaka araka izay azonao atao amin'ny loharanom-pahalalana rehetra hampiakatra ny laharam-pahamehana amin'ny teny lakile tena mifaninana. Maninona no tsy ataonao tombokavatsa eo amin'ny vodin'olona fotsiny ny sary famantarana anao ary atsipyo ao amin'ny Youtube? Hahazo fifamoivoizana tsy misy ifandraisany betsaka amin'izany koa ianao… ary mety ho kely ny vidiny.
Nahazo lavitra tamin'ny marketing nomerika isika kanefa miverina amin'ny paikadim-bava foana. Ny paikaditra taloha masomaso bebe kokoa manohy mamely ireo mpivarotra. Ny angano dia hoe tokony hisarika ny olona hiditra amin'ny tranokalanao ianao… ary ao anatin'io vondrona io no ahitanao olona. Imbetsaka isika no mahita fa tsy mahomby ny paikady, saingy saika hiverina aminy foana ireo mpivarotra. Bebe kokoa ny masom-bolo mitovy hevitra amin'ny orinasa maro.
Tsy marina izany. Ary izany no antony tokony hampiasambola orinasa varotra miditra amin'ny SEO.
Mbola gaga ihany aho amin'ny isan'ny olona mivarotra ny tenany ho manam-pahaizana momba ny SEO nefa tsy miraharaha akory ireo mpitsidika an-tserasera navadika ho mpanjifa. Alohan'ny hiresahan'izy ireo amin'ny mpanjifa dia mijery ny filaharana izy ireo, mandeha mitady ny teny lakile avo lenta rehetra, ary manipy azy ireo teny lafo momba ny fomba hanafihan'izy ireo azy. Fomba mahatsiravina io ary mihemotra tanteraka.
Raha marika efa miorina amin'ny Internet ianao, ianao efa manana antontam-baovao momba ny fiavianao avy amin'ny Internet. Jereo fa tsy nilaza aho aiza ny fifamoivoizana dia avy. Hoy aho aiza ny raharaham-barotra dia avy. Midika izany fa ny famerenana ny Analytics ho an'ny hetsika, tanjona ary fiovam-po izay mitarika fahatsinjovana ny marikao ka hahatonga azy ireo ho mpanjifa.
Ny ankamaroan'ny fifamoivoizana azonao dia tsy ao anatin'io sehatra io… koa maninona ianao no miahy fa mahazo fitsidihana bebe kokoa avy amin'ireo mpitsidika izay tsy hanao raharaha miaraka aminao velively? Azo antoka fa ny sasany amin'ireo olona ireo dia hizara ny mombamomba anao amin'ny olon-kafa - zavatra tsara izany. Saingy tsy hitranga izany rehefa mizara ianao atiny mifandraika amin'ny mpihaino mety.
Raha miasa amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana ianao dia mila manomboka amin'ny famantarana ireo teny lakile izay mitondra valiny… dia miamboho miverina. Manana laharana afovoany amin'ny teny lakile mifanentana amin'ireo mitondra ny varotrao ve ianao? Atombohy amin'ny fanatsarana ireo pejy ireo ho an'ireo teny lakile ireo mba hitombo ny varotrao. Matetika, lava rambo ireo fa tsy dia sarotra ny miasa.
Ankehitriny ianao hitondra ny valin'ny orinasa fa tsy eyeballs ary handoa valiny ny ezaka ataonao SEO.
Singa 5 an'ny tolo-kevitra momba ny varotra mahomby
Anatomy amin'ny virus mandeha
Apr 4, 2012 amin'ny 5: 07 AM
raha ny hevitro, ny fomba tsara indrindra hamantarana ireo teny lakile izay hitarika ny valin'ny seo, dia ny manomboka amin'ny fanentanana google adwords kely hanandramana ny fahombiazan'ny teny fanalahidy sy ny fomba hahafantaran'ny olona tsara kokoa ny orinasako amin'ny Internet. Aorian'ny 1 volana dia azonao atao ny manana data ampy hanatsarana ny vokatra voajanahary.
Apr 4, 2012 amin'ny 10: 16 AM
Fomba tsara tena mandeha tsara! Indraindray ny mpanjifanay dia tsy manome antsika izany safidy izany - fa matetika izahay manandrana miresaka azy ireo amin'izany! Azonao atao ny manandrana fitambarana an-jatony na an'arivony amin'ny alàlan'ny PPC. Misaotra nanampy an'izay!